5 matsutso ekupukunyuka: chii chauri kumirira kurongedza sutukesi yako? | Bezzia
5 matsutso ekupukunyuka: chii chauri kumirira kurongedza sutukesi yako?
Maria vazquez | | famba
Isu takasiya zhizha kumashure asi hatidi kutiza uye tsvaga nzvimbo nyowani. Mazuva maviri, matatu kana mana akakwana kuti unakirwe nema getaways atinofunga nhasi uye izvo zvinokutora iwe kunzvimbo dzakanyanya kunaka panguva ino yegore.
Autumn inosvibisa iyo nzvimbo yereddish, ocher uye brown tones, ichiita edu epaki mapaki kupfeka nyowani mashizha. Asi isu tinogona zvakare kuyambuka miganhu uye tisina kutambisa nguva yakawandisa parwendo, shanyira maguta madiki uye anodziya kwatinonzwa tiri pamba. Iwe unoda kuziva here kuti mashanu mashanu emuchando getaways atakugadzirira iwe?
Iyo Baztan Valley trilogy yakamutsa kufarira munzvimbo ino yeNavarra kwaunogona kufema runyararo uye mufaro wepanyama. Nharaunda inotongwa nemasango anodonha ayo anochinja mumwaka wega wega uko iwe unogona zvakare kuwana akawanda madzimba edzimba uye epingi mapurazi edzimba ane makuru mabalkoni; dzimba dzemamongi dzekare nemabhiriji pamusoro penzizi dzinokwakuka; zvinangwa zvakapararira mumafaro nemakomo ...
Maguta gumi nemashanu anoumba ino nharaunda yakakwana yeimwe yako yekupukunyuka: Oronoz-Mugaire, Arraioz, Irurita, Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Lekaroz, Gartzain, Elbetea, Arizkun, Azpilkueta, Erratzu, Amaiur-Maya naElizondo, chikuru guta kubva kumupata. Kukwesha kwakasimudzwa pakati pezana regumi nemanomwe negumi nemapfumbamwe emakore ne Mari yeIndia uye kubva kuvavakidzani vaishanda mudare reSpain.
Mavari muchawana dzimba dzekurima dzakashandurwa kuita dzimba dzakanaka dzenyikas kwaunogona kunakidzwa netsika uye hunhu hunhu hwevanhu veBaztan. Iwe unogona zvakare kuzvishandisa sehwaro kuita dzimwe dzakakurumbira nzira kana zviitiko zvakaita se:
Shanyira iyo vanobiridzira iyo inobatana nemapako ari pedyo eUrdax, Zugarramurdi naSara
Tora maonero anofema kubva ku Ziga maonero.
Shanyira chiteshi Izpegi dolmens kana iwo megaliths eErratzu-Alduides.
Famba pane nzira Abartan, rwendo rwe12,60 km. chapupu chetsika yekare yevafundisi inotanga kubva kuZiga.
Famba yakanaka promenade ye Xorroxin mapopoma. Nzira inotungamira kunonaya mvura, munzvimbo yemafaro anonakidza.
Iyo Sierra del Segura dunhu inoviga makomo akapatsanurwa nemipata yakatetepa uye makoronga akadzika akavezwa nenzizi nehova. Iyi inzvimbo ine rombo rakanaka kubva kune yakasikwa uye nzvimbo yekutarisa inosvika kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwedunhu reAlbacete.
ari dzimba dzakanaka izvo zvinoumba, runako rwemamiriro epasirose akayambuka nerwizi Madera uye nzvimbo dzepanyama dzekudzivirirwa kwakasarudzika dzine gejografi yayo yakaoma inoita kuti ive imwe yenzvimbo dzinonakidza mudunhu rese uye yakanakisa kushanya mumatsutso.
Pakati pezvakawanda zvekushanya, hongu, uchafanirwa kusarudza iwo anonyanya kukwezva kwauri, akadai se:
Kushanyira nzvimbo dzepanyama yekudzivirirwa kwakakosha senge Chorros del Río Mundo uye iyo Cabaña de los Mojones.
Tsvaga muRiópar chishamiso che kunobva rwizi Mundo.
Tora maonero kubva ku Liétor maonero uye Letur.
Admire iyo wakajeka musha weAyna.
Nakidzwa muBogarra nePaterna kunaka kwenzvimbo yakayambuka ne Rwizi Madera.
MuSpain mune nzvimbo dzakawanda kwaunogona kunakidzwa nemavara ane mavara anopendwa mumatsutso edu, senge Tejera Negra sango rebeech, mune Dunhu reGuadalajara. Iyo pendi yemavara, iyo moss inovhara pasi uye runyararo rwakatyorwa nehova dzinoita mamiriro ekurota.
Yakabatanidzwa mu Natural Park yeSierra Norte de Guadalajara, musango zvakare munokura beech, Pyrenean oak, Scots pine, yew, holly uye birch. Nzira mbiri dzeraundi Vanokutendera kuti uiongorore netsoka: iyo "Senda de Carretas" (6km.) Uye iyo "Senda del Robledal" (20 km). Uye zvakare, kune zvakare kwakanyorwa nzira yakatenderera nzira yemabhasikoro anosvika kuZarza rwizi.
Iwe une sarudzo yekusvika nemotokari panzvimbo panotangira nzira. Unogona kusiya mota yako mukati mekupaka (8km kubva kuInterpretation Center) iyo inosvika uchishandisa nzira yemusango. Mumatsutso, zvakadaro, iyi paki yemotokari inozadza saka zvinodikanwa kuti uchengetedze pamberi. Uchapupu hwekuti ndeimwe yeanonyanya kufarirwa magwa ekudonha.
Prague ndiro guta guru reCzech Republic uye ye kurota nzvimbo yeBohemia. Guta rinofarira kufamba zvishoma nezvishoma uye mune iyo kona yega yega ine chimwe chinhu chekukuudza. Kurasika mumigwagwa yayo pakutanga kwematsutso chiitiko chakakura kana uchipfekedza guta nekumwe kushuvira.
Mazuva maviri kana matatu akakwana kuti uwane migwagwa yakare yakakomberedzwa ye Guta rekare, Nakidzwa nerunyararo rweGuta rekare revaJudha uye hukuru hweHradcany, dunhu repamusoro rePrague, vanopinda rimwe remaraibhurari akanaka kwazvo pasi rese, fungisisa maonero kubva padenga reDancing House kana kuravira waini yakaunganidzwa kuti unzwe imwe zvimwe.
United Kingdom inyika ine hupfumi hukuru hwevashanyi uye mapaki asingaverengeke ezere akazara nenzvimbo dzakanaka uye dzakasvibira dzakadai seLake District. Iyo ndiyo hombe kwazvo kuUK epaki epaki; mamwe madhishi makumi masere anofadza nharaunda dzeiyi paki yenyika iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweEngland uye yakaziviswa Nhaka Yenyika.
Mikana iri mupaki yechisikigo haigumi. Iwe unogona kuita nzira dzakasiyana kuburikidza nemakomo, famba iyo nzira dzinobatanidza makungwa, shanyira rimwe remaguta anoyevedza munzvimbo iyi, ita zviitiko zvemvura ... Mumazuva matatu kana mana hazvizove nyore kuti iwe uone zvese saka uchafanirwa kuronga kupona kwako zvakanaka uye sarudza akakodzera kwazvo kwauri kubva ku kutevera kushanya:
Hike nzira inoenda kuOrestrest Head kuti uwane maonero asinganzwisisike eLake Windermere.
Dzidzira imwe mhando ye Acuatic mutambo : kufamba nechikepe, kufamba nechikepe uye kayaking paLake Windermere kana Derwent Water.
Shanyira Ambleside, guta rinoyevedza rine cobbled rakazara nedzimba dzedombo dzenzvimbo iyi.
Tsvaga Stockghyll Force, mapopoma ari pakati pesango remashiripiti.
Kufungisisa zvakatenderedza iyo dombo dombo naCastlerigg.
Torwa nemweya wekurota weiyo Buttermere nyanza uye iro guta rebohemian rine zita rimwe chete.
Wakatoshanyira chero yenzvimbo dzatinokumbira iwe pakati pedu nguva yekudonha?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » famba » 5 matsutso ekupukunyuka: chii chauri kumirira kurongedza sutukesi yako?
Matanho ekudzidza kufungisisa
Vegetarianism uye mabhuku matatu kuti uzvinzwisise